Tag Archives: kitaaba
BAGA GAMMADDAN—YUNIVARSIITII BULEE HORAA KEESSAA HAYYUU TOKKICHAAN KITAABNI LAMA BAHE!!!
Barreessaan kun hayyuu jabaa aadaafi seenaa Booranaafi Gujii caccabsee nyaatedha. Qorannoo guddoo inni waggaa kudhanii oliif gadi fageenyaan xiinxale kun waa’ee siyaasa Afriikaafi Kan Oromoo …
Bu’aa Ba’ii Maraa Dabarsinee kunoo SIIFSIIN jildii 7ffaa saba Oromoon geenyee jirra. Dabalataanis, Jildii 8ffaa hojjennee xumuruurratti argamna. Qabiyyeewwan utubaa sadii gurguddoo jalatti kan …
Kitaaba #Afaan #Oromoo kan ijoolle(#Dabballee) guyya hardha magaalota adunyya hunduu gabaa iraa ooluf deema. Maal ree bakka jirtan maratti kitaaba Afaan #Oromo kana bituu dhan …